Samsung ရဲ့ Galaxy | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဇန္နဝါရီလ 21, 2015 မောင်းသူ 0
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Samsung Galaxy Ace S5830i mobile phone（white）.The event starting today, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေဖြင့်, ပထမဦးဆုံးအ-တာဝန်ထမ်းဆောင် ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Samsung Galaxy Grand i9082 mobile phone（black）.The event starting today, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနောက်ဆုံးအနေဖြင့်, ပထမဦးဆုံးအ-တာဝန်ထမ်းဆောင် ... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဇူလိုင်လ 1, 2014 osshakespeare 0
Mobile phone and tablet what would you choose? Physical terminal fair was held in Nanjing, today the first day of the calendar inalot of new products. Samsung exhibition display ofasmart phone, called the Tab Q it has... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဇွန်လ 18, 2014 osstevejobs 0
Samsung GALAXY Note III is the third generation of Samsung Note series products, equipped witha5.7 -inch full Gao Qingxuan screen (Super AMOLED),aresolution of 1080 p (1920 * 1080 pixels ကို), carrying samsung Exynos 5... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Samsung Galaxy W exposure:7လက်မ 720 p screen
မေ 19, 2014 osshakespeare 0
အဆိုပါ7inch 720p Galaxy W screen Morning news, on May 19, foreign media exposure byapair of South Korea carrier SK Telecom, publicity pictures. Publicity of the new product on the picture isanew machine,... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဇန္နဝါရီလ 17, 2014 admin ရဲ့ 0
In the past year, who is the top position in Tablet PC Industry? No doubt, Ipad Mini is the most popular. And then the Samsung Galaxy is in the second. Windows Surface also did well. In these three tablets, do you already... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဒီဇင်ဘာလ 7, 2013 admin ရဲ့ 0
Nokia has been trying hard to play catch-up in the smartphone race foralong time now. Analysts who have tested the device said that it was “without doubt” the best smartphone camera on the market. The Lumia... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Technology_Internet စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ OS ကို-STORE HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ဥပဒေရေးရာအနက် စီပီယူ Software များ HD Graphics processor ​​ကို 64-နည်းနည်းက Windows Intel က device ကိုမော်ဒယ် နည်းပညာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် ပရိုဆက်ဆာ Nokia က မိုဘိုင်းဖုန်း Samsung က
နည်းပညာ HTC က Software များ 64-နည်းနည်းက Windows Intel က Server ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စမတ်ဖုန်းများ Samsung က ပရိုဆက်ဆာ Nokia က HD Graphics Samsung ရဲ့ Galaxy မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က processor ​​ကို စီပီယူ Technology_Internet ဥပဒေရေးရာအနက် OS ကို-STORE စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Sony Ericsson က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ device ကိုမော်ဒယ် Qualcomm မှ